नेपालमा नाँच्न जान्ने नायक/नायिका नै छैनन् : कविराज गहतराज | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home मनोरञ्जन नेपालमा नाँच्न जान्ने नायक/नायिका नै छैनन् : कविराज गहतराज
नेपाली चलचित्रका अहिलेका अधिकांश गीतमा कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी देखिन्छ । लोकपि्रय नृत्य निर्देशक कविराजले काम गरेका थुप्रै चलचित्रका गीत हिट छन् । तर, कविराज चलचित्र क्षेत्रको गतिविधीबाट सन्तुष्ट छैनन् । कलाकारमा देखिने अव्यवसायिकता, निर्माताको कञ्जुस्याँइले उनलाई दिक्क लागेको छ । उनै कविराजसँग अनलाइनखबरका लागि विजय सुवेदी ‘आवाज’ले गरेको नृत्य संवाद :
१. नेपालको चलचित्र नृत्य कुन शैलीमा ढल्केको छ ?
चलचित्रको शैली भन्ने नै होइन, गीत व्यवसायिक चलचित्रमा हुन्छ । गीतमा स्टाइल नै हुँदैन । गीत मनोरञ्जनको लागि मात्र हो ।
२. नेपालमा ‘एवीसीडी’ जस्ता चलचित्र बनाउन संभव छ कि छैन ?
यस्तो चलचित्र बनाउन कतैबाट पनि संभव देख्दिन ।
३. आखिर हामीलाई के कुराले रोक्छ ?
हामी आफैमा त्यो स्थानमा छैनौ । हामी त्यो परिवेशमा पनि हुर्किएनौ । खुट्टा तान्ने प्रवृत्ती, अरुलाई गिराउने शैलीले यो संभव छैन । यहाँ एकले अर्कालाई साथ नै दिदैनन् ।
४. हामीसँग कलाकार, डान्सर नै छैनन् हो ?
यहाँ डान्सर नै छैनन् । डान्स गर्ने कलाकार त छन्, तर उनीहरु चलचित्रमा हिट छैनन् । विश्वमै चर्चित बनेका डान्सरहरु एउटै चलचित्रमा कोरस नाच्न पनि तयार हुन्छन् । तर, नेपालमा हिरोको पछाडि नाच्दा आफू सानो भएको महशुश गर्ने डान्सर छन् ।
उसले आफूलाई विश्वकै हिरो सोच्छ । सानो कुरामा घमण्ड गर्ने धेरै छन् । यसैले नेपालमा डान्सिङ चलचित्र बनाउने संभावना नदेखिएको हो ।
५. तपाई कोरियोग्राफी गर्दा के हेर्नुहुन्छ, गीत/कलाकार वा अरु केही ?
म चलचित्रको अवस्था, गीत कुन तरिकाको हो त्यो हेर्ने गर्छु । चलचित्रको कथा अनुसार कस्तो बनाउँदा राम्रो हुन्छ, त्यसलाई हेरिन्छ । अनी कलाकारले यस्तो स्टेप गर्न सक्छन् या सक्दैनन्, त्यो हेरेर तयार पार्छु ।
६. कोरियोग्राफरले निकालेको स्टाइल गर्न सक्ने नायक छन् नेपालमा ?
जुनसुकै स्टाइल गर्ने नायक नै छैनन् । डान्समा त्यस्तो कोही पनि छैनन् ।
७. नायिकामा को देख्नुहुन्छ, नाच्न सक्ने ?
नायिकामा प्रियंका कार्की र मेनुका प्रधान देख्छु ।
८. नेपाली नायक तथा नायिकाको कमजोरी के हो ?
नेपालका कलाकार व्यवसायिक भएनन् । एउटा चलचित्र खेल्ने वित्तिकै आफूलाई स्टार सोच्ने प्रवृत्ती छ । मनले चाह्यो भने गर्न सकिन्छ, तर चलचित्रप्रतिको चासो र चिन्ता नै भएन ।
९. कलाकारले चलचित्रका लागि नृत्य गर्न नसकेको हो ?
हामी वर्कशप केही गर्दैनौ । छायांकनमा पुगेपछि मात्र काम गर्छौ । यहाँ त कलाकारलाई कुन स्टेप सजिलो छ भनेर खोज्नुपर्छ ।
अलिकती नयाँ र गाह्रो स्टेप त नेपाली कलाकारले गर्न नै सक्दैनन् । नयाँ आउनेलाई चलचित्रको भाषा थाहा नै भएन, पुरानालाई नयाँ शैली नै थाहा भएन । झन्, ग्रुप गीतमा धेरै समस्या छ । सिनियरहरुलाई म सिनियर हुँ भन्ने घमण्ड भयो, नयाँलाई मलाई सबै आउँछ भन्ने भ्रम भयो । अहिले हामीले राम्रो स्टेप भन्दा नी सजिलो स्टेप गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
१०. निर्माताले कञ्जुस्याँई गर्छन् कि स्वतन्त्र काम गर्न दिन्छन् ?
यहाँ त्यस्ता धेरै छन्, जसले गानाको स्केच तयार गर्दा धेरै कुरा सोच्छन् । तर, जब छायांकन स्थलमा पुग्छौ, पैसा खर्च गर्ने बेलामा पुरै संझौता गरिन्छ । नेपालमा चलेका ब्यानरको पनि यही समस्या छ । गफमा बलिउड स्तरका गीतको कुरा गरिन्छ, तर बनाउने बेलामा पुरै संझौता गरेर काम गर्नुपर्छ । मुख्य चलेका ब्यानरमा नै यही समस्या छ ।
११. गीत बजारमा आउँदा, एउटा कोरियोग्राफरले सोचेको भन्दै कती कमजोर भएर आउँछ ?
एक त हामीसँग गुणस्तर धेरै कम छ । कतीपय गीतमा त लाजमर्दो नै हुने अवस्था आएका छन् । केही गीतमा ५०-६० प्रतिशत देखिन्छ, धेरैमा त म १० प्रतिशत पनि देख्दिन ।
१२. सन्तुष्टी भएका गीतहरु के-के होलान् ?
पूर्ण सन्तुष्टी त म कुनै पनि गीतबाट छैन । तर, ‘तिमीलाई हात देउ, के म तिम्रो साथी बन्न सक्छु, तिमीसँगै, घन्टी बज्यो, डोला-डोला हातमा, झुकेका नजरले’ लगायतका गीतहरु मन पर्छन् ।
चलचित्र ‘लज्जा’का सबै गीतहरु राम्रा लाग्छन् । हिन्दी चलचित्र गरे, त्यसको गीत पनि राम्रो बनेका छन् । ‘ड्रिम्स’ चलचित्रका लागि माथिल्लो मुस्ताङ, पोखरामा गरेका गीतहरु खुबै राम्रो बनेका छन् ।
१३. कुन कलाकारसँग काम गर्न सजिलो लाग्छ ?
आर्यन सिग्देल, सविन श्रेष्ठ, दिलिप रायमाझी, प्रियंका कार्की, केकी अधिकारी सजिला छन् ।
१४. गाह्रो कुन कलाकारसँग लाग्छ ?
यस्ता त धेरै कलाकार छन् । उहाँहरु गर्न पनि नखोज्ने, उहाँहरुको कुरा मात्र धेरै सुनिदिनुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुले आफूलाई फरक सोच्नुहुन्छ ।
१५. कोरियोग्राफीमा व्यवसायिकता छ ? प्रतिस्पर्धा पनि होला नि ?
व्यवसायिकता त छ, तर कसरी त्यसलाई लिने भन्ने हो । हामी आफू नै व्यवसायिक नभएकाले पनि हो । प्रतिस्पर्धा त बहुतै कम छ भन्दा हुन्छ । फेरि, यो कामलाई प्रतिस्पर्धाको रुपमा भन्दा पनि काम राम्रो गर्ने भन्ने बिषयमा हेर्न जरुरी छ ।
१६. पारिश्रमिक मागे अनुसार पाउनु हुन्छ त ?
पारिश्रमिक एकदमै कम छ । झन्, मागेको भन्दा झनै कम पाइन्छ । अहिले यसैको फाइदा उठाउँदै विदेशी चलचित्र नेपालमा आएका छन् । यिनीहरुलाई पारिश्रमिक कम दिएपनि हुन्छ भन्ने सोचेर विदेशी चलचित्र नेपालमा छायांकन हुन थालेका छन् ।
१७. एउटा फरक प्रश्न, राजेश हमालले किन चलचित्रमा नृत्य गर्न सक्नुभएन होला ?
पहिलो कुरा उहाँसँग समय नै भएन । दोश्रो कुरा, सबै कलाकारलाई नाच्न नै पर्छ भन्ने छैन । राजेश हमालसँग गीतलाई आफूमा ढाल्ने शैली भने छ । उहाँलाई थाहा छ नाच्न आउदैन भन्ने, तर नाच्नुपर्छ भन्ने सोच भने छ । भूवन केसीमा एउटा अदा थियो । अहिलेका कलाकारलाई त मेलोडी गीतमा स्माइल दिन पनि आउँदैन ।
१८. कुन कलाकारलाई कोरियोग्राफी गर्न मन छ ?
निरुता सिंहलाई थियो तर काम गर्न पाइन । विपना दिदीसँग पनि काम गर्ने मन थियो ।
१९. हाम्रो मुख्य कमजोरी के रह्यो त ?
हामीसँग सोच छ, मन छ तर मुख्य कुरा भनेकै इगो समस्या हो । यहाँ घमण्ड बढी छ । समस्या अरुमा मात्र होइन, ममा पनि छ । निर्देशक प्रदिप श्रेष्ठको सोच हलिउड भन्दा कम छैन, तर यहाँको स्तरले उहाँलाई पनि हाम्रै सोचमा ढालिदिएको छ ।
पहिले पनि यही ४० लाखमा चलचित्र बन्थे, अहिले पनि यही बजेटमा चलचित्र बनिरहेका छन् । त्यतीबेला नेपाली र हिन्दी चलचित्रको स्तर एउटै थियो । तर, बलिउडले विश्वव्यापी सोच्यो, हामी गाउँबाट शहरमा सोच्दै छौ । यो बिषय सबैलाई थाहा छ, तर यहाँ कोही पनि बोल्दैनन् ।
विदेशमा पुराना भएका चलचित्र बल्ल नेपालमा चल्छन् । हलमा चलाउने चलचित्रको सानो टीभीमा हेरेर कलर करेक्शन हुन्छ । गुणस्तरिय हल छै भनेर कम क्वालिटीमा चलचित्र बनाउने नै होइन । मैले दमौलीको हलमा ‘फास्ट एन्ड फ्यूरिसियस हेर्दा जुन क्वालिटी भेटे, त्यो क्वालिटी नेपाली चलचित्रको ट्रेलर हेर्दा भेटिन । हामीले हल झुर भयो भन्दै चलचित्रको क्वालिटी नै झुर बनाएका छौ ।